an-trano » Momba ny Lightstec-China LED Strip Light LED Aluminum Profile Manufacturer mpamatsy
Lightstec dia a China Mainland Registered orinasa SY HongKong Registered Company.Manao raharaham-barotra amin'ny mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izahay.
Lightstec toy ny orinasa jiro LED. Manana nitarika hazavana orinasa ao Shenzhen before.In 2013 we move our factory to Zhongshan city .we're always optimizing our manufacturing process to offer high-performance & quality products to our clients with competitive price.All of our LED Products are produced by a team of skilled craftspeople and fabricated from the finest materials available.
Ny vokatra lehibe misy anay dia ahitana hazavana manjavozavo led, henjana led strip, RGB led strip, led aluminium profil, led linear light, led light channel, led power supply, led controller, led panel light, led tube and led accessories.
Hihaona amin'ny Ekipantsika
Manam-pahaizana momba ny jiro
Fomba fanaraha-maso ny kalitao
Tonga tao amin'ny orinasa ny fitaovana rehetra, tsy maninona pcb , LED, ic, fanoherana, profil aluminium, tariby, mila fanamarinana QC. ny zavatra rehetra ilaina dia mahafeno ny fepetra takiana.
2, fanamarinana CCT
Mila andrana ny led rehetra hafanan'ny loko , Mila manamarina ny famirapiratana, ny mari-pana amin'ny loko, ny Loko Rendering Index. Mila ataontsika antoka fa mividy ny lokon'ny vokatra mitovy amin'ny baiko farany ny mpanjifa.
Ny LED rehetra dia mila dehumidification alohan'ny SMT.65 ℃ * 8 ora .Izany dia miantoka ny maina.
4. dingana SMT
Mamokatra LED, IC, fanoherana eo ambonin'ny PCB. Mampiasa milina automatique haingam-pandeha izahay. Ataovy azo antoka fa eo amin'ny toerana mety ny singa rehetra.
Aorian'ny fizotran'ny SMT, ny LED sy ny PCB dia miaraka amin'ny pasteur. Izany dia ilaina ny mieritreritra ny reflow soldering machine ary eo amin'ny 220-250 ℃ eo ho eo. Avy eo ny solder mametaka levona sy mifamatotra.
Ny departemantan'ny QC dia manara-maso 100% amin'ny jiro mipetaka mba hahazoana antoka fa tsy misy lesoka LED sy LED fiovan'ny loko.
7. Soldering PCB
Ny milina fametahana mandeha ho azy dia hamidy ny 0.5M pcb 10pcs hatramin'ny 5meter. Araka ny fangatahan'ny mpanjifa. Ny tariby dia fametahana amin'ny tanana. Ny fametahana milina dia miantoka ny kalitaon'ny fametahana PCB.
8. Madio PCB ambonin'ny
Rehefa vita ny fametahana, dia hodiovina amin'ny alikaola ny strip PCB.
9. Fitsapana fahanterana
Ny vokatra LED rehetra dia mila fitsapana jiro mandritra ny 8 ora, miantoka fa mandeha tsara ny LED tsirairay. Amin'ity dingana ity, azontsika atao ny mahafantatra ny toetrandro mitarika miasa tsara? Mitarika amin'ny mari-pana miloko mety ? Mpamily miasa tsara? Tena zava-dehibe izany..
10. Tsy tantera-drano
IP55 / 65 (Miaro ny hamandoana) Silicon lakaoly eo amin'ny ambonin'ny PCB. IP65 (miaro ny orana) mampiasa fantsona silisiôma ho an'ny tantera-drano. IP67 (fotoana fohy amin'ny fampiasana anaty rano). tsindrona lakaoly silisiôma ao anaty tavoahangy silika.
11. Kasety 3M
Apetaho amin'ny alàlan'ny fametahana ny tady LED rehetra 9080A 3M kasety, mba hahazoana antoka ny fametrahana mora ho an'ny mpanjifa farany.
12. Fanaraha-maso ny kalitao farany
Ny QCy dia hanamarina ny reel rehetra, mba hahazoana antoka ny loko mazava amin'ny strip, ary koa ny bika aman'endriny.
Led flexible strip lights, Led Aluminum profiles (Extrusions) ary Led linear lights.
SMD5050, SMD3528, SMD3014, SMD2835, SMD5630, SMD2216 Series Led strip jiro.
Surface-mounted, Recessed, Pendant, Corner, Round, Stair, Fomba mora azo.
Vitsy ny karazana jiro led linear, saingy afaka manampy anao izahay hanangona jiro linear araka ny fangatahanao.
OEM ODM Service dia tonga soa. Manolotra serivisy maromaro izahay mba hamenoana ny filan'ny mpanjifa samihafa.
Fijery fohy momba ny tetikasanay
FCC ho an'ny jiro LED
IC ho an'ny jiro LED
ROHS ho an'ny jiro LED
CE ho an'ny jiro LED
ETL ho an'ny jiro LED
CTI ho an'ny jiro LED
COC ho an'ny jiro LED
Fanontaniana? Soraty izahay!
Serivisy 7/24 ora, hiverina aminao haingana araka izay tratra izahay, ary tsy mihoatra ny 12 ora aorian'ny naharay ny hafatrao. Aza misalasala mifandray aminay raha misy fanontaniana. 🙂
Xiaolan, Guangdong, Sina.
Mpamatsy Jiro Led azo itokisana ho an'ny tetikasanao
Fanohanana Fanazavana Fanampiana maimaim-poana ao anatin'ny 24 Ora